Yaaddannoo mana hidhaa Maa'ikalaawii: hidhamtoonni duraa maal himu laata? - BBC News Afaan Oromoo
Manni hidhaa Maa'ikalaawwii manneen hidhaa biyyattii namoonni hedduu maqaa qorannootiin itti dararamaa turan keessa dursaan kan eeramu ture.
Haa ta'u malee, mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa fi qorannaa yakkaa maa'ikalaawwii jedhamuun beekamu guutummaatti akka cufe jimaata darbe ibsuusaa miidiyaalee biyya keessaa wabeeffachuun gabaasuuun keenya ni yaadatama.
Maa'ikelaawwii keessatti haalli qorannoo yakkaa maal akka fakkaatuu fi cufamuunsaa hiika akkkamii akka isaaniiif qabu namoota achi keessaa bahan gaafanneerra.
Inni jalqabaa maqaansaa akka eeramu hin fedhu, inni biroon ammoo Lixa Goojjam irraa kan hidhamee ture obbo Geetaachoodha.
Halkan sa'aatii sadiitti nu waamu, waan hin beekne beekta himi jechuun nu garafu.
Halkan torba ani achi keessaa bahee kanan garafamee,halkan keessaa sa'aatii sadiitti nu fuudhanii, ganama barii immoo sa'aatii kudha tokkotti kan mana fincaanii deemamu.
Sa'aatii kudha lama yommuu tahu immoo shaayee fi daabboon nuuf kennuun achuma manicha keessati nutti cufama. Ergan ji'a tokkoo fi torban lama achi turee boodan gara mana isa 'Sharaatan' jedhamuutti ol bahe.
Hangan achi keessa turetti immoo halkan torba garafamee keessaa kan baay'ee na dhibu, guyyaa dhumaa halkan keessaa sa'aatii sadiitti na waamanii hanga sa'aatii sagaliitti na garafanii, achuma na tursiisan.
Natti wal jijjiiranii na reeban, warri guyyaa na qoratan waanan hin beekne beekta himi naan jedhan.
Madda suuraa, Google Maps
Obbo Geetachoo dabalataan wayita ibsan, ''Guyyaa jalqabaa akkuma gadi na baasaniin qeensa koo harka bitaa irra jiru narraa buqqisan. Itti aansuun amani jedhanii bishaan litira lama qodaa hayilaanditti guutanii qaama saalaa kootti rarraasanii na dararan.
Gaggababseen sitti himaa jira. Yeroo sadaffaas osoon of gatee dhaabadhuu poolisoonni lama qaama saalaa koorra walitti aansuun na dhahan.
Qaamni saalaa koo dhiita'ee fincaan gaafa na dhorku gara kilinika maa'ikelaawii na geessan. Haa tahu malee natti wayyaa'uu waan dideef kilinikichi gara Hospitaala Riferaalaa Poolisiitti naa barreesan. Isaanis ciisee haa wal'aanamu jedhan.
Haa tahu malee maa'ikelaawiin akkan ciisee hin wal'aanamne godhan. Hanga ammaati wal'aansa osoo hin argatiin qaamni saalaa koo akkuma dhiita'etti jira. Kolaafameen jira.''
Waa'ee cufamuu Maa'ikalaawis akkas jedhu, ''Maa'ikelawiin cufames cufamuu baates hiika hin qabu. Sababnisaas warreen nama reeban hin jijjiramne. Inni haaraa ijaarameyyuu mataasatiin maa'ikalaawii dha. Maa'ikalaawwii isa Kaazaanchis jedhamee beekama. Manicha ofii barbaadanii cufan.''
Lakkoofsa hidhamtoota maa'ikelaawwii turanii fi gara mana hidhaa biraatti dabarfaman gaafachuuf, hoggantoota bulchiinsa manneen hidhaa federaalaa gaafachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne.
'Dur yeroon hidhaa hiikamu namoonni dhufanii baga hiikamte naan jechuuf baayyee sodaatu turan'
Qondaaltoonni Gaazaa Dilbata kalee namoonni 42 ajjeefamuu himan